को- रोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? चर्चित ज्योतिष सोम नेपालले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण भबिस्यबाणी (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
May 16, 2021 436
को- रोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? चर्चित ज्योतिष सोम नेपालले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण भबिस्यबाणी (भिडियो हेर्नुस्) । अहिले चारैतिर को- रोनको क-हरले सताइरहेको छ । भारतको भ-यानक दृश्य देखेका सबै नेपालीले राम्रैसंग निशेधाज्ञाको पालना पनि गरिरहेका छन् ।
अबको अवस्थामा त अहिले नेपालले लगभग को- रोनालाई नियन्त्रण लिन धौ धौ भैरहेका छ । यसैबीच यहि बिषयमा बरिष्ठ र चर्चित ज्योतिषले आफ्नो केहि विचार राखेका छन् । भनिन्छ भाग्यमा जे लेखेको छ त्यो भएर नै छाड्छ। तर भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दोएर अडिदैन भन्ने हरु पनि तमाम हुन्छन ।
शायद सोचेका सबै कुरा र योजना हरु कसैका पुरा हुँदैनन होला तर मेहनत काम प्रतिको लागब हुने हो भने र त्यो अनुसारको समय पनि अनुकुल भैदिने हो भने असम्भभ भन्ने कुरा केही हुँदैन होला । चर्चित ज्योतिसिहरु ले ग्रह तथा बिभिन्न नछेत्र हरुको आधारमा भबिस्य मा हुने कुरा घट्ने घ-टना हरुको पहिले नै घोषणा गरेका हुन्छन् ।
कतिपयका भबिस्यबाणी मिल्छन त कसैका मिल्दैनन। चर्चित ज्योतिसी सोम प्रशाद नेपाल भन्छन कुनै पनि कुरा बोल्दा केही न केही आधार मा रहेर बोल्नु पर्छ ताकी पछी आँफै बोलेर त्यो कुरा को खन्डन गर्न सकियोस । हेर्नुहाेस् बाँकी कुराकानी भिडियाेमा:-
Prevजनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन
आज मंगलबार चम्किँदैछ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल